Nkọwapụta Companylọ ọrụ - Jiangsu Three Sheep Garden Garden Co., Ltd.
Guzosie ike na 2014, Shenzhen Enimei Technology Development Co., Ltd. kwadoro nke ukwuu iji mepụta ngwa ọrụ mara mma, nke na-etinye aka na nyocha & mmepe, imepụta, imepụta, ịre ahịa na ire ọmarịcha ngwaọrụ gafee ụwa. Anyị na-enye ọtụtụ ngwaahịa na-egbutu ọnụ gụnyere ihu nchacha ihu, ncha ihu anụ ahụ, onye na-eme nkpuchi, ihe nhicha latrik, isi ojii na ihe ndị ọzọ.
Na anyị onwe anyị oru ngalaba & ule ụlọ nyocha, na-na ọkachamara nkà na ndị bara uru R&D mmepụta ahụmahụ, anyị nwetara ihe karịrị 60 nchọpụta Kemịkalụ maka mma teknụzụ na ọdịdị aghụghọ, Bụ a elu-tech enterprise na Shenzhen City. Anyị nwere ụlọ ọrụ na 300 square mita na ụlọ ọrụ mmepụta ihe karịrị 1400 square mita. Na ụkpụrụ nke mba, ọkaibe, ọkachamara na ndị bara uru, anyị na-enye ndị ahụ otu dragon ọrụ si R&D, rụpụta na ahịa, na site na anyị onwe ika ka ODM & OEM.
Anyị ụlọ ọrụ ike management usoro dị na mba ụkpụrụ nke àgwà: ISO 9001: 2015, ma gafere ngwaahịa akwụkwọ nke CCC, OA, ROHS, FCC, PSE wdg
> ENIMEI nke Onwe Ya: Zụlite, kwalite ma ree ọmarịcha ngwaahịa na nlekọta onwe onye n'okpuru anyị proprietary brand, PHILBABY, INAMEX, BEAUTYFULL STAR
> OEM / ODM / OBM Iwu: Nye aha akara ahaziri iche na ngwugwu ngwugwu, na-agbakwunye uru na ngwaahịa mbụ
> Brandlọ Ọrụ Ikike Onye Na-ere Ihe: Ndị na-ere ikike ikike Ikike forlọ Ọrụ maka ụdị ụfọdụ na mba ụfọdụ
Anyị onwe anyị factory, nnyefe na oge, na anyị na-wetara nlezianya chọrọ na àgwà nke anyị na-ezute na-azụ ahịa 'chọrọ. Maka ngwongwo ọ bụla, ndị QC anyị emejuputala nyocha nke ọma tupu ebuga ha. Maka nzaghachi nke ndị ahịa ọ bụla, anyị ga-agbasochi anya ma nye ha azịza kachasị afọ ojuju.
Iji mepee ahịa anyị ka mma, anyị na-arụsi ọrụ ike itinye akwụkwọ maka ụdị nkwenye na ụghalaahịa dị iche iche maka ngwaahịa anyị, iji mejuo ihe achọrọ na mba dị iche iche.
Ọzọkwa, anyị na-arapara n’ịnọ n’ọtụtụ ahịa ahịa mba ofesi ka anyị wee nwee ike ịgwa ndị ahịa anyị okwu ihu na ihu, ma mara ibe anyị nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, anyị esonyela na nyiwe azụmaahịa B2B a ma ama ma na-egosipụta ike anyị na ịntanetị, iji mee ka ọtụtụ mmadụ mara banyere anyị.
Anyị na-abụwanye ewu ewu n’ihi ọrụ anyị na elekwasị anya. Anyị ga-dị ka mgbe niile, raara nye mma ụlọ ọrụ na-enye mma ngwaahịa na zuru okè ọrụ.